ဖေ‌ဖျောဝါရီ 4, 2020 – Healthy Life Journal
ခရစ်ယာတနင်းများနေလို့ . . .
ဒေါက်တာမိုးအောင်ကျော်နိုင် (အထွေထွေရောဂါအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး) မှ ဖြေကြားပေးပါသည်။ Q. creatinine 217 mol Male ပါ။ ၁၁၃တောင် များနေပါသည်။ ဘာဆေးသောက်သင့်ပါသလဲ။ Hercules Htoo(FB) A. ခရစ်ယာတနင်း ၂၁၇ ရှိနေတာက အကြမ်းအားဖြင့် ကျောက်ကပ်ထိခိုက်...
အသက် ၄၀ ကျော် အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးများ၏ ကျန်းမာရေး
ဒေါက်တာကျော်စွာဦး (ရောင်ခြည်သစ်ကုသိုလ်ဖြစ်ဆေးခန်း-တာဝန်ခံ)နှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်း Q. အသက် ၄၀ ကျော်လာချိန်မှာ အမျိုးသားနဲ့ အမျိုးသမီးတွေဟာ ဘယ်လိုပြောင်းလဲမှုတွေ ဖြစ်တတ်ပါသလဲ ဆရာ။ A. အမျိုးသမီးတွေမှာ အသက် ၄၀ ကျော်-၅၀ အရွယ်လောက်ရောက်လာရင် သွေးဆုံးတာတွေ ဖြစ်လာတတ်ပါတယ်။ အမျိုးသားတွေမှာတော့ အသက်...